Mila fanavaozana ifotony | NewsMada
Mila fanavaozana ifotony
Par Taratra sur 13/07/2017
Nivaly omaly ny BEPC teto Antananarivo Renivohitra. 48,04%-n’ireo nanala izany fanadinam-panjakana izany no afaka. Mitotongana ny voka-panadinana ! Tarehimarika ahafahana milaza fa mitotongana koa ny tontolon’ny fampianarana. Ny rafi-pampianarana iray manontolo mihitsy no ahitana izay tsy fietezan-javatra izay. Anisan’ireny ireo namolavola ny fandaharam-pampianarana, ny mpampianatra, ny tompon’andraikitry ny sekoly, sns.
Iangonan’ny rihitra bebe kokoa ny mpampianatra. Tsy nahay nampianatra ve izy ireo? Mety ho mahay fa mbola rera-batana sy miady saina amin’ny tambin-karama, karama, ho tafiditra ho mpiasam-panjaka ve sa tsia, sns. Ankoatra ireo, tsy azo hadinoina fa ity asa mampianatra ity no saika hataon’ireo manana diplaoma kanefa tsy mahita asa mifandraika amin’izay fari-pahaizana sy fianarana norantoviny izay. Tsy maintsy misy fiantraikany any amin’ny voka-panadinan’ny mpianatra ny tranga tahaka ireo.
Tompon’andraikitra koa ny ray aman-dreny. Tsy nanara-maso. Tsy naneho fahavononana hanampy ny zanany amin’ny fianarana fa niezaka nampitovy azy ireny tamin’ny zanaky ny hafa ka nividy finday avo lenta mba hanaovana « facebook ». Maraina, atoandro, hariva, alina, milalao finday. Tsy manam-potoana ianarana intsony.
Mila fanavaozana ifotony ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy mifanaraka amin’ny zava-misy sy ny filan’i Madagasikara ny fampianarana misy eto. Ohatra iray maneho ny lesoka ny tsy fahaizan’ny zaza malagasy manoratra ny teny malagasy kanefa 12 taona nianarana izany izy ireo ! Tsy azo hantenaina hipoitra avy any amin’izany zaza (mpianatra) izany mihitsy ny fitiavan-tanindrazana.
Mitaky fahavononana goavana ny fanarenana ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara satria mila ravana tanteraka io napetraky ny vahiny sy ny « zaza mandimbiny » io. Ampianarina sy tezaina ary beazina hahalala ny momba azy ny zanaka malagasy. Avy amin’izay no hivelarany eo anivon’izao tontolo izao. Sa ve sarotra be ny manao izany ? Mila « experts » vahiny ? Aiza ka ry zareo Sinoa indray no mahalala fa misy volamena ao Soamahamanina. Naninona anefa izany raha mba nianarana tany amin’ny jeografia momba an’i Madagasikara ?